နေအိမ် » တိုက်ပွဲတွေ » Powerpuff Girls Mech Mayhem
ဂိမ်းသတင်းအချက်အလက်များ: Powerpuff Girls Mech Mayhem
ထိန်းချုပ်ရေး: use mouse to play Powerpuff Girls Mech Mayhem Game.
ကစား: 22,942 tag ကို: Powerpuff Girls, Powerpuff Girls games, Powerpuff, mayhem, mayhem ဂိမ်း, ကာတွန်းကွန်ယက်ကိုဂိမ်း, မိန်းကလေးများ
အဆိုပါအဲလ်ဆာနဲ့ Anna အစ်မတွေနိုငျငံတျောသညျတပြင်လုံးကိုမြင်ကွင်း၏ရှုခင်းကိုအနည်းငယ်ခံစားနိုင်ဘို့တစ်ဦးဆိုင်ကယ်စီးချင်ပေမယ့်သည်သူတို့အဝတ်ကို, ဆံပင်ပုံစံတွေနှင့်စူပါဖက်ရှင်စေအလှအပပစ္စည်းများအတွက်ဝတ်စားဆင်ယင်ဖို့လိုပါတယ်။
စူပါ Barbie ကယျတငျမြို့
Barbie ယခုရာဇဝတ်မှု၏မြို့ကာကွယ်ရမယ်သူတစ်ဦးသူရဲကောင်းဖြစ်ပါတယ်, ဒါပေမဲ့ဒီအဘို့သူမကောင်းစွာအလှဆုံးအဝတ်ကိုနှင့်အလှအပပစ္စည်းများအတွက်ဝတ်ဆင်ရန်လိုအပ်ပါသည်
clarance run, run !!!
Clarence အလွန်ဆာလောင်မွတ်သိပ်ဖြစ်ပါတယ်, ဒါကြောင့်သူ့ကိုအကောင်းမြင်အ Clarence ၏ဝမ်းကိုဖြည့်ဖို့အဖြစ်အများအပြားဘာဂါစားရန်အတားအဆီးအပြည့်အဝအပေါင်းတို့သည်လမ်းပြေးတစ်ဦးရေစာလုပ်ကိုကူညီပေးပါတယ်။
Oggy နှင့်စောပိုငျးကာလအတွက်ဆုံးရှုံးသွားသောပိုးဟပ်, သူတို့ Oggy အစာရှောင်ပြေးခုန်ဖို့ Space Bar ကို key ကိုသုံးပြီးအားဖြင့်အတားအဆီးရှောင်ကူညီဒိုင်နိုဆောအားဖြင့်သစ်တောထဲမှာလိုက်လျက်ရှိသည်, တစ်ဦး, D ကိုပြန်, ရွှေ့ဖို့။